Journalist of BBC Nepali Service-Dharan, Sunsari, Nepal
पुराना सामाग्रीहरु July 2016 (1) June 2016 (2) February 2016 (1) January 2016 (1) September 2015 (2) July 2015 (1) January 2015 (2) October 2014 (1) September 2014 (2) July 2014 (2) May 2014 (1) April 2014 (1) January 2014 (4) November 2013 (1) October 2013 (3) September 2013 (2) August 2013 (1) July 2013 (6) May 2013 (2) April 2013 (1) March 2013 (1) February 2013 (3) January 2013 (2) November 2012 (1) October 2012 (6) September 2012 (1) August 2012 (3) July 2012 (2) June 2012 (7) May 2011 (7) April 2011 (6) March 2011 (1) November 2010 (1) October 2010 (2) July 2010 (2) May 2010 (1) March 2010 (1) February 2010 (1) January 2010 (1) September 2009 (1) August 2009 (1) July 2009 (3) April 2009 (1) November 2008 (1) September 2008 (3) August 2008 (3) June 2008 (1) May 2008 (5) March 2008 (4)
खोज पत्रकारिता केन्द्रले आयोजना गरेको डेटा जोर्नालिजमको तालिममा नक्सा वनाउन सिकेकी थिए । आज पहिलो पटक प्रयास गरे । तर नेपालको पुरा नक्सा देखाउन सकिन । अर्को पटक फेरी प्रयास गर्नेछु । बाढीले वगाएर वेपत्ता भएको समाचार नेपाल खवर डट कमवाट लिएर मैले नक्सा वनाएकी हु ।
म्यार्दि भिरको कथा
11:30 AM annapurna, Tracking, गाँउघर, नियात्रा, पत्रकारिता, फोटो No comments
म्यार्दि भिर । साच्चै कहाली लाग्दो छ । पहाड जस्तो अग्लो ढुङगालार्इ खोपेर बाटो वनाइएको छ । यो भिर लमजुङ र मनाङ जिल्लाको सीमानामा पर्छ । म्यार्दि भिर खोप्दा सडकको दायाँपट्टी मनाङ तर्फ जादा ढुङगाको केही भाग बाँकि रहेको छ । त्यसले भिरमा बारको काम गरेको छ । त्यही बारको काम गरेको ढुङगाको भित्तामा सिमेन्टको कुर्सी जस्तो आकार वनाइएको छ । कुर्सिमा ढल्केर वस्नलाइ अडेस लगाउने स्थान जस्तोमा कालो मार्वल टासीएको छ । मार्वलमा पहेली रङगमा चामे सडक खन्ड निर्माणको क्रममा ज्यान गुमाएका ३ जना सैनिक जवान र ६ जना सर्वसाधारणको नाम खोपीएको छ । बाटोको छेउमा उभिएर एसो तल तिर हेर्दा आङ नै सिरिङग हुन्छ ।
पारी भित्ताहरुमा अहो ! कति ठुला ठुला चट्टानका पहाडहरु । त्यो पहाडलाइ छिचोलेर मस्याङदी नदि वगेको छ । बाटो नै भरी झरनाले मन नलोभ्याउने पनि होइन । तर बाटोका लागि त्यो झरनाहरु खतरा मानिदा रहेछन । अलि पानी वढेसी गाडी आवाज जावतमा समस्या पार्दो रहेछ ति झरनाले । ताल बजार नजिकैको बाटो थोरै सिमेन्टले ढलान गरिएको रहेछ । त्यहा पनि सानो झरना छ । त्यो झरनाको पानी कस्सीएर भुइमा झर्दा उडेको पानी बोकेको हावाका कारण वाटो राम्ररी नदेख्दा कयौ पटक अन्दाजको भरमा गाडि गुडाएको म चढेको जिपका चालक रुपेस लामाले वताए । रुपेसको यो भनाइ सुनेर मन मनै झन डर लागेर आयो । तर डराएर पनि भएन त्यो बाटो जसरी पनि काटेर जानु पर्थ्यो ।
नजिकवाट म्यार्दि भिर
वेसीशहर बाट चामेको सडक ६५ किलो मिटर छ । बाटो नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले वनाएको हो । अतिनै कठिन गरि जिलेटिनको प्रयोग गरेर बाटो बनाइएको छ । सडक डिभिजन कार्यलयका दमौली तनहुँका अनुसार यो बाटो सुरक्षाको हिसावले एकदमै खतरामा पर्दोरहेछ। भौगोलीक रुपमा पनि देश कै कठिन बाटोको सुचीमा कार्यलयले राखेको जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यलय दमौलीका प्रमुख भानु जोशीका अनुसार कर्णाली राजमार्ग भन्दा पनि कठिन सडकका रुपमा यस्लाइ लिइएको छ । यो राम्रो मौसममा मात्र गाडि चल्ने सडक हो । सजिलो ठाँउ बाहेक भिरमा मुस्कीलले बाटोको चौडा ४ मिटर छ कतै कतै त ३ पनि छ । साघुँरो भएका कारण सवारी ओहोर दोहर गर्दा पालो दिने ठाँउ पनि छैन कतिपय स्थानमा । बाटो चौडा गर्ने ठाँउ पनि छैन । त्यसैले साँझ ६ बजे देखि उता सवारी साधनलाइ आवत जावत गर्न प्रहरीले रोक लगाइएको छ ।
टाढाबाट म्यार्दि भिर
बाटो खुलेको करिव ४ वर्ष भएको छ । मनाङको सदरमुकाम चामेवाट मनाङ वजारमा गाडि पुगेको त एक वर्ष पनि पुगेको छ । चामेबाट मनाङको वाटो भने त्यति धेरै कठिन छैन । अप्ठयारो ठाँउमा ढलाना गर्न अनी खोलाहरुमा पुल वनाउन यो आर्थिक वर्षमा ५ करोडको ठेक्का लगाइएको छ । तर गएको वैशाख १२ गतेको भुइचालो पछि काम गर्न भने नसकिएको सडक डिभिजन कार्यलय दमौलीलीले जानकारी दिएको छ । भौगोलिक रुपमा भिरालो भएका कारण ग्राभलिङ गर्दा एक वर्ष पनि टिक्दैन । बाटो सुधार गर्न थोरै रकमले पुग्दैन । अरवौ खर्च हुन्छ । अहिले छुट्याउदै आएको वजेटले बाटो मर्मत गर्न छेउ पनि भ्याउदैन । वर्षा याममा असार देखि भदौ सम्म सडक मर्मतको काम गर्न सकिदैन । बर्षको ६ महिना मात्र काम गर्न सकिन्छ । भिरमा पहिरो जाने अनी ढुङगा खस्ने भएकाले पनि काम गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको डिभिजन कार्यलय दमौलीका प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।
ढुङगा खोपेर वनार्इको सडक म्यार्दि भन्दा केही माथि ताल वजार नजिकैको भिर ।
वेसी शहरवाट मनाङ तर्फ जादा जगत, च्याम्चेत र म्यार्दि भिर अनी चामे भन्दा माथी भ्राताङको वाटो साच्चै अप्ठयारो छ । अजङगका ठुल ठुला चट्टानका पहाडहरु आकासै छोला जस्ता छन । यस्तो भिर पहरालाइ फोरेर नेपाली सेनालाइ बाटो वनाउन निक्कै समय लागेको थियो ।
ढुङगाको वीच भागमा खोपेर वनार्इको बाटो
मनाङमा वेस्सरी हिउ परेका कारण म र मेरो समुह थोरङला काटन असमर्थ भयौ । मनाङमा दुर्इ दिन वसेर फर्के । २ वजे मनाङबाट जिप हिड्यो । राति आठ वजे धारापानि पुगे । बाटोमा ससना वजार छन । त्यहाँ रोकिदै जिपको चालकले लुकी लुकी रक्सी खाएको थाहा भयो । म सगै यात्रामा रहेका महेश जी ले रक्सी खाएको सुटक्क मलाइ भने । मनमा चिसो पस्यो । तर यो कुरा म र सुनिता वीच नै गोप्य राख्यौ । अप्ठोरो वाटो त्यसमा पनि राति । चालकले निक्कै नियन्त्रण गुमाएका थिए । म र सुनिता अगाडीको सीटमा थियौ । चालक मातेर टिल्ल भए । उनी हातको स्टेरिङ छोडर म माथि ढल्किए । के गरेको भर्इ भनेर मैले कराए । उनको टाँउको मेरो दाँया कुममा पुगेको थियो । हतार हतार मैले स्टेरीङ समाएर भित्ता तर्फ वटारे । त्यतिन्जेलमा पछाडिको सीटमा वस्ने महेस जी र एक जना यात्री झ्याँल खोलेर हतार हतार निस्किए । धन्न ज्यान जोगियो ।
गाडि साइर्ड दिनलार्इ निक्कै गाह्रो हुन्छ ।
चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको भनी प्रहरी कार्यलयमा उजुरी गर्न साथि सुनिता र म गयौ । पछि अरु यात्रीहरुले पनि साथ दिए । त्यो जिपमा म लगायत ११ जना सवार थियौ । भोली पल्ट विहान चालकलाइ एक हजार जरिवाना तिराएर छोड्यो ट्राफिक प्रहरीले । चामेमा गएको फागुन (२०७२ फागुन ) वाट मात्र अस्थाइ ट्राफिक प्रहरी कार्यलय स्थापना गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यलय स्थापना गर्न पुर्व सवारी आवत जावतको काम नेपाल प्रहरीले नै हेरिरहेको थियो । प्रहरीका अनुसार यो रुट भएर चल्ने अधिकांश जिपका चालकले पहिला चिसोबाट वच्न भन्दै मादक पदार्थ सेवन गर्थे । जरिवाना र कार्वाही गर्न थालेपछि सेवान गर्न छोडे पनि फाट्टफुट्टले अहिले पनि सेवन गरेको पाइएको छ ।
बाटो कठिन भएकाले यात्रा गर्ने जो कोही पनि साँझ परेपछि बाटो काटिन्छ भन्दै रातमा नहिडेकै राम्रो हुन्छ । गाडिवालाहरुले जाउ भनेर कर गर्दा रहेछन ।
11:27 AM कथा, गाँउघर, पत्रकारिता, लेख No comments
पानि रहने छाँट नै देखिएन । अलिक मन कस्तो कस्तो भर्इरहेको थियो । सधै समाचार संकलन गर्न जाँदा फुरुङग हुने मन आज कता कता गह्रुगो लागिरहेको थियो । सम्पादकसँग कसरी सहज हुन्छ त्यसैगरी अन्तवार्ता लिने भन्ने सल्लाह भयो । अकुरको घरमा फोन गरे । जेठि भाउजुले फोन अठार्इन । मैले मेरो परिचय दिए । त्यसपछि अकुरको जेठा दार्इ देव वहादुर तामाङसग कुराकानी भयो । मैले अप्ठ्यारो मानी मानी म तपार्इहरुसग कुराकानी गर्न चाहान्छु अकुरकाबारेमा आउन सक्छु भनेर अनुमति मागे । उनले सहजै अनुमति दिए । "आमा बुवा भने वोल्न सक्दैनन" देव वहादुरले मसग टेलीफोनमा सुनाए । घरको लोकेसन सोधे । भेट्ने समय लिएपछि । एकछिन तयारि गरे । कसरी प्रश्न सोध्नेहोला भनेर ? मेरो प्रश्नले पिडामा भएका बेला झन पिडा हुन्छ की भनेर खुव चिन्ता लाग्यो । रुवाबासी होला । यहि कल्पना गरे । तर पनि उनीहरुसँग कुरा नगरि सुखै छैन । यही कुरा मनमा खेलाउदै म तरहरा अकुरको घर तिर हुइकिए । पानी परिरहेको थियो । पानिमा रुझ्दै अनेकन मनमा कुरा खेलाउदै चारकोसे जंगल छिचोले । फोटो, भिडियो पनि लिनु पर्ने । कुराकानीका लागि मसँग जम्मा जम्मी २ मिनेट समय छुट्यार्इएको छ । चुनौती नै चुनौती ।
लाखमाँया तामाङ (अकुरकी आमा )
तरहरा पुगेर अंकुरको घरमा फोन गरे । मलार्इ वजारवाट पश्चिम तिर आउनु भनियो । त्यही अनुसार म घर तर्फ गए । दुर्इ तले आर्कषक घर नजिकै पुगे । घरको पहिलो तलाको बाहिर पट्टीको बरन्डामा थुप्रै जना मानिस देखे । अकुरको घर हो की भन्दै यसो नियालेको मात्र के थिए एक जना महिलाले हातले बोलार्इन । अकंरको घर यहि भन्ने संकेत मिलेपछि घर अघि स्कुटर रोके । स्कुटरको डिकीमा राखेको रेकर्डर, मोबार्इल, क्यामेरा झिके । अनि घर भित्र छिरे । सवैसग परिचय गरे । आफन्त र छिमेकी जम्मा भएका थिए । कहाँबाट कसरी कुरा शुरु गर्ने भनेर एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो । पानी कति परेको भन्दै अनौपचारिक कुरा गरे । त्यहाँ उपस्थित भएकाहरुले पनि हिजो देखि परेको पानी रोकिएको छैन भने । घर छेउको खाली जग्गामा भ्यागुत्ताहरु यसरी करार्इरहेका थिए की मानौ अकुरको निधनको खवरले रोएको झै भान भो मलार्इ । भ्यागुत्ता किन यति सारो बोलेको भन्दै वरन्डावाट खेततिर हेरे । वरन्डावाट भ्यागुत्ताहरु घाँटी फुलार्इ फुलार्इ कराएको स्पस्ट देखे । पानी पर्दा यसरी नै भ्यागुत्ता कराउने गरेको उनीहरुले सुनाए ।
अफगानिस्तानको राजधानी कावुलमा भएको अात्मघाति वम हमलामा ज्यान गुमाउने १२ मध्ये अकुर तामाङ एक थिए । मलार्इ कसरी कुरा गरौ भनेर विलखवन्धमा परिरहेको वेला अकुरको निधन प्रति समवेदना व्यक्त गर्न आएकी एक महिला दिदीले मोरङका एक जना घार्इते भएको कुरा कोट्यार्इन । अकुरको परिवारलार्इ भेटेर छापिएको समाचारपत्र घरमा राखिएको रैछ । अर्की एक महिलाले नागरिक देखाउदै भनिन् "नानी यहाँ समाचार छ।" मैले हेरे अकुरको दाजु भाउजुसग कुरा गरेर लेखिएको समाचार थियो । त्यसपछि वल्ल कुराकानी गर्ने गर्न अलिक सहज भयो । अकुरका जेठा दाजु देव वाहदुरले अकुरको पार्थिव शरिरलार्इ ल्याउनका लागि सहि गरेर पठार्इ सकेको वताए । उनी पनि सात वर्ष सम्म अफगानिस्तान वसेको अनुभव सुनाए । भार्इ अकुर साब्रे इन्टर नेसनल कम्पनी मार्फत अफगानिस्तान गएको वताए । त्यसपछि उनले उहाँ मेरो आमा हो । अहिले ६५ बर्ष पुग्नु भो भनेर आमा तर्फ औला देखाउदै चिनाए । यति कुराकानी गर्दा गदै अकुरका ठुलो आमा र सानीआमाहरु आर्इपुगे । गेटमा दिदी वहिनीहरु देख्न साथ अकुरकी आमा लाख माँया तामाङ फेरी ठुलो आवाज निकालेर रुन थालिन । फेरी कुराकानि रोके । त्यो दुखद घडिको भिडियो खिचे । तस्वीर खिचे । मन मनै कस्तो पेशा ? अरु रुदा अरुको पिडालार्इ चाख मानि मानि खिचेर वाहिर ल्याउनु पर्ने हो भनेर भुतभुताए । रुवार्इ कम भएपछि एकछिन सन्नटा छायो । सानो एक वालकले किन फोटो खिचेको भनेर मेरो छेउमा आएर सोधे । म अवाक भए ।
बुबा भिम वहादुर तामाङ
के गर्नु तपार्इहरु पिडामा हुनुहुन्छ । तर पनि म कुराकानी गर्न आएको छु । तपार्इहरुलार्इ गारो लाग्छ भने पनि ठिकै छ कुराकानी नगर्दा पनि हुन्छ । तपार्इहरुको सुझाव मान्न तयार छु भने । अकुरका दार्इले कुरा गरौ न हुन्छ नी भनेर सहजै अनुमति दिए । कुराकानी शुरु गर्दा मैले अकुरको नाम अङकुर भनेर उच्चारण गरे । पत्रपत्रिकाले अङकुर भने तर सहि नाम चाही अकुर हो भनेर मलार्इ सम्झाए । मेरो नाम देव वहादुर हो देवराज लेखेछन । अङकुर भनेर गरेको उच्चारण मैले अकुर भनी सच्याए । उनीसग १५ मिनेट जति कुराकानि गरे । कुरा गर्दा गदै उनी कयौ पटक भक्कानिए । अकुरको निधनको खवर आए देखि परिवारका सदस्य सवै जना सोकमा डुवेका । "मलार्इ सम्हाल्न गाह्रो भर्इरहेको छ" देव वहादुरले भने । बुहारी आउदै छ हेटौडाबाट झन गारो हुने होला अव भन्दै थिए । कुराकानी सकेर म विदा माग्ने तरखरमा थिए । अकुरकी मार्इली भाउजुले चिया खान भान्सामा वोलार्इन । म चिया खाँदिन । ढिला भो जान्छु भने । पानी परिराँको छ । तातो चिया खाएर जानलार्इ उनले कर गरिन् । मैले नार्इ भन्न सकिन् । चियाको एक सुर्को के तानेकी थिए अकुरकी श्रीमती गोमा गोले आर्इपुगिन । फेरी घरमा रुवावासी चल्यौ । म चिया खान छोडेर फोटो खिच्न भिडतिर हिडे । अकुरकी श्रीमती गोमाले आमा लाखमाँयालार्इ च्याप्प अङगालो मारेर आमा के भयो नी भन्दै रुर्इरहेकी थिर्इन । साथमा अरु पनि रोइरहेका थिए । रोएको देखेर मेरा पनि आँखा रसाए । फोटो खिच्न नै भुलेछु । एक जना पत्रकार साथिले भने धमाधम भिडियो खिचिरहे । भिडभाड भयो । भिडभाड नगर्नु उता खुला ठाँउमा लानुन आमा र गोमालार्इ मैले अकुरकी जेठी भाउजुलार्इ सुटुक्क भने । नभन्दै अडेसा दिदै आमा लाखमाँया र गोमालार्इ खुला ठाँउमा लगियो । म अलमल्ल परे । घरको बरन्डामा जेठा दार्इ देव वहादु आँसु पुछिरहेका थिए । बिदा माग्न सकिन । समाचार संकलन गर्न आइपुगेका धन वहादुर पुरी पनि डाइरी र कलम लिएर चुपचाप वसीरहेका थिए । फोटो खिच्नु भो भन्दै हातले संकेत गरिरहेका थिए । मैले छैन भनेर टाँउको हल्लाए । यति खेर सम्म म पुगेको चार घन्टा वितेको थियो । मलार्इ घर फर्कन हतार भएर पनि फर्कन सकिरहेको थिइन । पत्रकार हतार हतार आयो । सोधे गए । भन्छन होला भनेर मन भित्र डर भर्इरहेको थियो । भित्र रुवावासी चलिरहेकै थियो । देव वहादुर उठेर वरन्डामा छिरेको पानी वाइफरले सोर्न थाले । अव विदा माग्ने समय यो नै हो भनेर मनमनै फैसला गरे । कुरा कानी गरे दुख दिए नरिसाउनु होला भनेर देव वहादुरसग हात जोड्दै माफ मागे । "किन रिसाउनु । अव के गर्नु यस्तै भयो । अव रोएर भार्इ आउदैन ।" हात जोडेर विदा मागे । यता भन्सामा मलार्इ दिर्इएको चिया त्यसै थियो । चिया दिने अकुरकी मार्इली भाउजु पनि आँसुका ठुला ठुला ढिक्का खसाउदै देवरलार्इ सम्झदै थिर्इन । एकछिन सम्झाए । रुन छोडिन । त्यसपछि उनीसग पनि विदा मागे । फेरी आउदै गर्नु है भनेर अनुरोध गरिन् । अकुर लाख माँया र ७८ वर्षिया भिम वहादुर तामाङका मन्तरे छोरा हुन ।
पत्रकारिता गर्ने क्रममा कयौ चोटी प्रश्न गर्दा गदै धेरैको आँसु झारियो । रोर्इरहेकालार्इ अन्तवार्ता गर्नु पर्दा सारै मन अमिलो भएका कयौ उदाहरण छन । यस्तो परिस्थितिमा के सोध्ने होला । कसरी कुरा गर्ने होला । कुरा गर्न नपरे नी हुने थियो भन्ने कुरा मेरो मनमा आउछ । तर पेशा हो गर्नै पर्यो । त्यही भएर पत्रकार सारै कठोर अनी निष्ठुरी हुन्छन भनेर वेला वेला टिका टिप्पणी पनि आएका थुप्रै उदाहरण छन । प्रश्न सोध्दा । विचार पुर्याउन पर्छ । तर यति ध्यान दिदा दिदै पनि कहिले काही पनि चिप्लिहालिदो रहेछ । नसोध्नु पर्ने प्रश्नहरु सोधिदो रहेछ । कस्तो वाध्यता । धन्न अहिले सम्म कसैले यसरी कुरा गर्दा गदै हप्काएका छैनन । रिसएका छैनन । गालि गरेका छैनन । धन्य छु ति महान मन भएका अनी चौडा छाति लिएका सम्पुर्ण समाचारका मेरा पात्रहरुसँग ।
मनाङ यात्रा भाग दुइ
12:01 AM annapurna, Dharan, Himal, manag, Nepal, गाँउघर, नियात्रा, फोटो No comments
बहिनी म्यार्दि भिर त आउन नै बाँकी छ भनेर म लगायत मेरो टिम चढेको गाडि धनीले बताएका थिए । विहान उठने वित्तिक्कै उनले भनेको यो शब्द मेरो दिमागमा दोहोरियो । पहाडमा जन्मेको व्याक्तिलाइ के को डर हुन्छ र भन्दै मन वुझाँए । बेसी शहरबाट मनाङ सम्म जिप चल्दा रहेछन । तर नाकावन्दीको असर र पेट्रोल अभावका कारण गएका बर्षहरु जस्तो सहज थिएन् । बाटो पनि सहज थिएन । सानो वाटो भएकाले विपरित दिसावाट आएको गाडिलाइ साइड दिन पनि गाह्रो रहेछ ।तर चालकहरु भने त्यस्तै अप्ठेरो वाटोमा गाडि चलाउदा चलाउदा अभ्यस्त भएसकेको वताए ।
विदेशी पर्यटकहरु कति आए यसको गणनाका लागि धरापानिमा चेक पइन्ट स्थापना गरिएको छ । मनाङ हुदै थोरङ्ला पास जाने अनी लार्के पास जाने पर्यटकहरुले धारापानी चेकपोष्टमा अनिवार्य नाम दर्ता गरेर जानु पर्ने नियम वनाइएको छ । धरापानी काटेपछि अप्ठेरो बाटो शुरुहुन्छ । पहाड र ठुला ठुला ढुङगा खोपेर वाटोहरु वनार्इएका छन् । अझ मनाङ र लमजुङको सीमाना म्यार्दि भिरमा वाटोको ट्रयाक खोल्ने क्रममा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । उनीहरुको नाम म्यार्दि भिरमा रहेको ढुङगामा खोपेर राखिएको छ ।
वेसीशहर चामे सडक खन्ड निर्माण गरिएको ४ बर्ष भएको छ । ६५ किलोमिटरको दुरी रहेको यो सडक नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदल गणले निर्माण गरेको हो । यस वर्ष २०७२ मा मनाङको सदरमुकाम चामे देखि मनाङ बजार सम्म कच्चीवाटो पुगेको छ ।
चामे सदरमुकामवाट २ दिनमा मनाङ पुगियो । लेक नलागोस भनेर विस्तारै हाम्रो टोली चामेवाट पैदल हिडेको थियो । चामेबाट एकजना सहयोगिले हाम्रो यात्रालाइ सहज वनाइ दिए । भएभरको झोला उनले नै बोकी दिए । त्यसबापत दैनिक ज्याला र खाजा खाना खर्च व्यहोर्नु पर्ने सम्झौता भयो । दुइ दिनको हिडाइपछि मनाङ पुग्न सफल भइयो । मनाङ पुगेको दिन साझ हाम्रो समुहलाइ हिउले स्वागत गर्न शुरु गरेको थियो ।
बाटोमा देखिने सेताम्मे हिमालको दृष्य अनी गुरुङ सस्कृति झल्कने मानेहरु र वरीपरि बार बनी उभिएका अजङगका नाङगो पहाडको दृष्यले हिड्दाको थकान मेटेको थियो । त्यहाको सुन्दरतालाइ क्यामराले कैद गर्न सम्म गरे । तर पनि कहिल्यै मन भरिएन । जति फोटो खिचे पनि खिचुखिचु लाग्ने दृष्यहरु छन । मनाङ पुग्न लाग्दा हिउले खाएर वनेका माटाका कलात्मक ढिस्काहरुको त के वयान गरु शब्द नै छैन ।
सडक निर्माणका क्रममा ९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
मनाङ यात्रा भाग एक
7:21 AM annapurna, manag, Nepal, Tracking, नियात्रा No comments
दशैले छपक्क छोपिएको थियो । आमा बुवा दशैमा छोरी आउछ भन्दै बाटो हेरेर वसेका थिए । भुकम्पको कम्पनको त्रास राम्ररी सेलाउन नपाउदै कैलाली जल्यो । कैलालीसगै मधेसमा आगो वल्यो । मधेसमा आक्रान्त भइरहोको वेला फेरी भारतिय नाकावन्दी थपीएको थियो । इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण दैनिक जिवन सारै कष्टकर वन्दै गइरहेको थियो । राजनितिक अवस्थाका कारण देशमा केही गर्ने तम्सेका युवाहरु साच्चै निरास हुदै थिए । यसै क्रममा साथी सुनिताले मनाङ मुस्ताङ हुदै थोरङला पास गर्ने योजना सुनाइन । उनको योजनामा म पनि लोभिए । कामको तनाव त्यतिक्कै थियो म माथि । यही तनाव कम गर्ने आसाका साथ साथीहरुसग म मनाङ यात्रामा निस्किए । साझको चार वजे धरानको वरगाछिवाट गाडी चढियो । इटहरी वस पार्कमा करिव हामी सात घन्टा वस्नु पर्यो । मधेस आन्दोलनका कारण पुर्ववाट पश्चिम जाने यात्रुवाहक वस अनी मालवाहक ट्रकहरु इटहरीमा जम्मा हुन्थे अनी एकै चोटी प्रहरी सुरक्षामा साढे १० देखि ११ वजे भित्रमा गनतव्य प्रस्थान गर्थे । पुर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यलयका अनुसार करिव दैनिक ५ सय भन्दा वढी सवारी साधनहरु यसरी प्रहरीको सुरक्षामा वर्दिवास सम्म पुर्याइन्थ्यो । पश्चिमवाट आउने सवारी साधन बर्दिवासमा जम्मा हुन्थे अनी पुर्व आउने गर्दथे । रातभरी सार्वजानिक सवारी साधन र मालवाहक ट्रकहरु प्रहरीको सुरक्षामा यो ब्लग लेख्दा सम्म ओहोर दोहोर भइरहेका छन ।
अान्दोलकारीको ढुङगाले सीसा फुटेका वस ।
पुर्ववाट पश्चिम अनी पश्चिमवाट पुर्व चल्ने यात्रुवाहक वसका अगाडिको सीसा अनी झ्यालहरु सवै फुटेका छन । कसैले प्लाष्टिक लगाएका छन । कसैले जाली लगाएका देखिन्छ । ढुङगाले नहानेको कुनै पनि वस बाकी छैन होला सायद । मधेसवादी दलहरुको कार्यकर्ताहरुले ढुङगा हानेका कारण वसका सीसाहरु फुटेको यात्रा गर्ने यात्रीहरुले वताए । यसरी दैनिक यात्रुवाहक वसमा ढुङगा हानिन्थे । अहिले यो यात्रा सम्मरण तयार गरिदा सम्म कम भएको छ पहिला भन्दा । म लगायत मेरो समुहमा अरु चार जना साथीहरु पोखरा जाने वसमा थियौ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण इटहरि पश्चिम लाग्ने वित्तिक्कै सडकको बाया पट्टी छेउमा खानेपानीको वोतल भरी भरी पेट्रोल राखिएका देखिन्छ । वस रोकिने वित्तिक्कै पेट्रोल पेट्रोल भन्दै विज्ञापन गर्छन व्यापारीहरु । पेट्रोल वोकेको सवारी साधनमा आगो लागेको कारण सवारी साधनमा पेट्रोलियम पदार्थ नवोक्न भनी सरकार अनुरोध गरिरहेको थियो । तर म चढेको पोखरा जाने वसमा भने टन्न पेट्रोल थियो । वस भित्र ड्रम नै राखिएको थियो । हिडदा हिडदै बस रोकिन्थ्यो । यात्रुहरु चढाउन रोकेको होला भनेर झ्यालवाट चिहाउदा थाहा हुन्थ्यो ड्रममा पेट्रोल अनी डिजल पो चढाएको चढाइएको रहेछ । अहो म त बमको माथि वसेर यात्रा गरिरहेकी छु जस्तो लाग्यो । एकदम डर लाग्यो । बस भित्र ढुङ डुङती पेट्रोलको गन्ध आइरहेकाले टाउको नै भारी भयो ।
दशैको समय त्यसमा पनि सीमीत सवारी साधन सडको वाया पट्टटी यति धेरै यात्रुहरु हात हल्लाउदै उभिएको देखिन्थ्यो । तर वसहरु खालि नभएकाले सुइया हुइकाइ हाल्थे । सारै विजोग देखियो यात्रीहरुको । जतासुकै रोकियो भने आन्दोलनकारीले ढुङगा हान्ने पिर पनि त्यतिकै थियो । झ्याल वन्द गरेर गर्मीमा निस्सासिदै वस्न वाध्य भए । गर्मी भयो पंङखा चलाउ भनेको वेला वल्ल पंखा चलाउथ्यो वसवालाले । वातानुकुलित वस भने पनि खै किन हो त्यो वातानुकुल भने एक पटक पनि चलाएनन । १० मिनेट सम्म पंखा चलेपछि फेरी रोकिदिन्थ्यो किन हो कुन्नी । सारै कष्टपुर्ण भयो यात्रा । एकातिर आन्दोलनकारीले ढुङगा हान्छन की भन्ने पिर अर्को तिर अति प्रज्वलनसील पेट्रोलिय पदार्थ सल्केला की भन्ने पिरले रातभरी वसमा निदान पनि सकिएन । धन्न हामी हिडेको दिन वसमा ढुङगा वर्सिएन । अगाडि यात्रा गर्ने एकजना यात्री भन्दै थिए “वैनी भारदहमा ढल्केवरमा काठमाडौवाट आउदा हाम्रो वसमा असिना वर्से झै ढुङगा वर्सिएको थियो । धन्न हामी कसैलाइ केही भएन । के गर्नु कामले यात्रा गर्नु परेको छ । नहिडु भने नी नहुने ।" भन्दै आफनो तितो यात्रा अनुभव साटे म सग ।
यात्रा अनुभव क्रमश प्रकाशित हुनेछ ।
Tweet to @sitamademba
किरण राई (१४) , दिपेन भुजेल (१५) र हुकमेन राई (१८) साइकलका विली , स्टपी र जम्प स्टण्टमा पोख्त छन्। शहरका कार्यक्रमहरूमा निम्त्याइन...
बेलवारीको जुत्ता र मोसोको कथा ।
मोरङ वेलवारी करम डाडाकी माया सार्की र मनोज विश्वकर्मालाइ गाउलेले मोसो दलेर जुत्ताको माला लगाइ दिएको घटना फेसवुक मार्फत सनसनी भो । वा...
पानि रहने छाँट नै देखिएन । अलिक मन कस्तो कस्तो भर्इरहेको थियो । सधै समाचार संकलन गर्न जाँदा फुरुङग हुने मन आज कता कता गह्रुगो लागिरहेको थि...
मलाइ गोली हान्यो ।
बेलुकाको सात बजेर अठ्ठाइस मिनट गएको थियो । दाइहरुसग चुनावको विषयमा छलफल हुदै थियो । मेरो घडिमा सात बजेर अठ्ठाइस मिनेट गएको थियो । फोनमा हे...
खोज पत्रकारिता केन्द्रले आयोजना गरेको डेटा जोर्नालिजमको तालिममा नक्सा वनाउन सिकेकी थिए । आज पहिलो पटक प्रयास गरे । तर नेपालको पुरा नक्सा द...
© Copyright 2012 Sita Mademba, Journalist of BBC Nepali Service-Dharan, Sunsari, Nepal ! Site Designed by : Rabindra Neupane
This Site has been visited times till now.